Mividy masinina misaron-tava hanombohana orinasa Facemask - Smart Tech Technology
Vaovao Tohana ara-teknika Mividy milina saron-tava hanombohana orinasa Facemask
Taorian'ny fanerena ny Facemasks any am-piasana sy amin'ny toeram-bahoaka, dia nitombo ny fangatahana sarontava. Raha teo an-tampony ny areti-mandringana dia tao an-trano ny ankamaroan'ny olona, ​​satria nanery azy ireo hijanona ao ny fanidiana. Ka avo ny tinady amin'ny saron-tava fa ny toe-javatra ankehitriny dia mahatonga azy io ho toe-javatra mitaky fitakiana be kokoa.
Nisokatra ny sekoly, saika ny birao sy ny indostria rehetra dia nisokatra avokoa, ny valan-javaboary, ny gym, ary na ny klioba aza dia nosokafana. Fa eo ny SOP, tsy afaka mandeha mamory na amin'ny toerana be olona ianao raha tsy manao sarontava. Mba hanatanterahana izany fangatahana izany dia ilaina ny famokarana maska ​​bebe kokoa. Satria efa eo ny fangatahana, Cake ny vokatra amin'izao fotoana izao, raha manao asa ara-potoana ianao ary te-hivoaka vola dia tokony handeha miaraka aminy ianao.
Mila ianao ihany mividy milina sarontava, manofa toerana hananganana azy, ary miaraka amina mpandraharaha milina sy mpiasa manohana roa dia afaka manomboka ny asan'ny maska ​​tarehy ianao. Ireto masinina sarontava ireto dia semi na mandeha ho azy tanteraka, midika izany fa ho avo kokoa ny taham-pamokaranao ary afaka mitantana ny fanamboarana ataonao amin'ny mpiasa vitsivitsy fotsiny ianao.
Raha vantany vao tafapetraka ilay masinina sarontava dia azonao atao ny manomboka ny famokarana sarontava. Aza hadino ny zavatra iray, aza manaiky lembenana amin'ny kalitao mihitsy. Betsaka ny fifaninanana amin'ity sehatra ity. Raha hampidina ny kalitao ianao dia hisy mpamatsy hafa am-polony maro hafa handroso hisolo anao. Raha hivarotra sarontava tena avo lenta amin'ny vidiny mirary ianao dia azo antoka fa hahazo varotra bebe kokoa.
Tsy lasa lavitra i Corona, mbola eo ihany. Iza no mahalala ny fotoana hisehoany indray. Ka ny filana sarontava dia ho eo mandritra ny taona vitsivitsy farafaharatsiny. Tsy hahazo vola fotsiny ianao fa hanampy ny mpiara-monina amin'ny ady amin'ity areti-mandringana ity.
Admin Aogositra 21, 2020
PreviousAza miala sasatra, manaova sarontava！